Momba ny JDL - JDL Global Environmental Protection, Inc.
Filôzôfia an'ny orinasa
Malemy ny rano ary afaka manova ny tenany amin'ny toe-javatra ivelany, miaraka amin'izay koa, madio sy tsotra ny rano. Miaro ny kolontsain'ny rano ny JDL, ary manantena ny hampihatra ireo toetran'ny rano miovaova sy madio amin'ny foto-kevitry ny fitsaboana rano maloto, ary manavao ny fizotran'ny rano maloto ho lasa fizotrany, fitehirizana loharano sy fizahantany ary manome vahaolana vaovao ho an'ny indostrian'ny fitsaboana rano maloto.
JDL Global Environmental Protection, Inc., any New York, dia sampana iray an'ny Jiangxi JDL Environmental protection Co., Ltd. (kaody stock 688057) Miankina amin'ny teknolojia FMBR (Facultative Membrane Bio-Reactor), manome ny serivisy fanarian-drano ity orinasa ity famolavolana sy fakan-kevitra momba ny fitsaboana, fampiasam-bola ho an'ny rano maloto, O&M, sns.
Ny ekipa teknikan'ny JDL dia misy consultants efa za-draharaha momba ny fiarovana ny tontolo iainana, injeniera sivily, injeniera elektrika, injenieran'ny fitantanana tetikasa ary injenieran'ny R&D mpitsabo rano maloto, izay efa nanao fitsaboana rano maloto sy R&D nandritra ny 30 taona mahery. Tamin'ny 2008, JDL dia namolavola ny teknolojia Facultative Membrane Bioreactor (FMBR). Amin'ny alàlan'ny hetsika zavamiaina bitika bitika, ity teknolojia ity dia mahatsapa ny fahasimban'ny Carbon, Nitrogen, ary Phosphore miaraka amin'ny rohy fanehoan-kevitra iray miaraka amin'ireo tsiranoka maloto organika vitsy kokoa amin'ny asa isan'andro. Ny teknolojia dia afaka mamonjy fatratra ny fampiasam-bolan'ny tetik'asa fitsaboana ny maloto sy ny dian-tongotra, mampihena be ny famoahana ireo fotaka voajanahary sisa tavela, ary mamaha amin'ny fomba mahomby ny "Not in My Backyard" sy ireo olana eo amin'ny fitantanana sarotra amin'ny teknolojika fitsaboana ny fako mahazatra.
Miaraka amin'ny teknolojia FMBR, JDL dia nahatsapa ny fanovana sy ny fanavaozana ny foibem-pitsaboana maloto avy amin'ny fotodrafitrasa ho lasa fitaovana mahazatra, ary nahatsapa ny fomba fanaraha-maso ny fandotoana ny fizarazaran-tany "Manangona, mitsabo ary mampiasa indray ny rano maloto". JDL koa dia mamolavola tsy miankina ny rafitra fanaraha-maso afovoany "Internet of Things + Cloud Platform" sy ny "Mobile O&M Station". Mandritra izany fotoana izany, ampiarahina amin'ny foto-kevitry ny fananganana "fotodrafitrasa fanadiovana ny maloto ambanin'ny tany sy ny valan-javaboary ambonimbony", ny teknolojia FMBR dia azo ampiharina koa amin'ny toeram-pitsaboana rano maloto momba ny rano maloto izay manambatra ny fampiasana rano maloto sy fialamboly ekolojika, manome vahaolana vaovao ho an'ny tontolo iainana amin'ny rano fiarovana.
Hatramin'ny volana novambra 2020 dia nahazo patanty famoronana 63 ny JDL. Ny teknolojia FMBR novolavolain'ny orinasa dia nahazo loka iraisam-pirenena marobe ihany koa, anisan'izany ny IWA Project Innovation Award, ny Massachusetts Clean Energy Center's Wastewater Treatment Innovation Technology Pilot Grant, ary ny American R & D100, ary notondroina ho "ny mety ho lasa mpitarika fandrosoana amin'ny fitsaboana maloto tamin'ny taonjato faha-21 "nataon'i URS.
Androany, miankina amin'ny fanavaozana sy ny fitarihan'ny teknolojia fototra ny JDL handroso hatrany. Ny teknolojia FMDR an'ny JDL dia napetraka tamina fitaovana maherin'ny 3.000 amin'ny firenena 19 ao anatin'izany ny Etazonia, Italia, Egypta sns.
Tetikasa mari-pankasitrahana IWA Innovation
Tamin'ny 2014, nahazo ny mari-pahaizana IB East Asia Regional Project Innovation Award ho an'ny Applied Research ny teknolojia FMBR an'ny JDL.
2018. Ny teknolojia FMBR an'ny JDL dia nahazo ny loka amerikanina R&D 100 an'ny fanekena manokana ny andraikitra ara-tsosialy ho an'ny orinasa.
Tetikasa Pilot MassCEC
Tamin'ny volana martsa 2018, Massachusetts, amin'ny maha ivon-angovo madio manerantany azy, dia nitady tolo-kevitra momba ny teknolojia fanodinana rano maloto manerantany eran'izao tontolo izao hitarika mpanamory teknika any Massachusetts. Taorian'ny herintaona nisafidianana sy fanombanana henjana, tamin'ny volana martsa 2019, ny teknolojia JDL's FMBR dia voafantina ho teknolojia ho an'ny tetik'asa WWTP mpanamory fiaramanidina Plymouth Municipal Airport.